XOG-Maxaa Kala Socotaa Shirka Beelaha Warsangeli ee Badhan iyo Xubnaha Kusugan Miyeyse Joogaan Somaliland.
Magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa ku sii qulqulaya wafuud kala duwan oo ka qaybgeli doonta shir looga arrinsanayo xaaladda siyaasadeed, midnimada iyo horumarinta guud ahaan gobolka Sanaag ayna ka qaybgeli doonaan bulshada gobolkaasi.
Xubnaha gaarey magaalada Badhan waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xassan, wasiiru-dowlaha Degaanka, Cabdirashiid Geelle, Wasiir ku xigeenka Arrimaha gudaha,Maxamed Musaddiq, wasiir ku xigeenka Warfaafinta, Cabdisalaan Siciid Faarax iyo wasiir ku xigeenka Duulista hawada iyo garoomada marwo Sucaad Saalax Nuur.
Gudoomiyaha barlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo, Xil. Cali Axmed Dhahar, Xil.Cabdiraxmaan Dhoorre, Xil. Axmed Cabdi Jaamac, saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland, ganacsato, xubnaha Qurba-joogta degaanka, siyaasiyiin hore, aqoonyahanno iyo hoggaanka dhaqanka oo isaga yimid magaalooyinka Damalla-xagarre, Xiingalool, Ceelbuh, Midigale, Buraan iyo Hadaaftimo ayaa waxa ay sidoo kale ku sugan yihiin goobta.
Shirkaan waxaa mudada uu socdo looga hadlayaa arrimaha ka taagan gobolka Sanaag gaar ahaan siyaasadda gobolka, sidii Somaliland looga saari lahaa deegaamada ay kaga sugan tahay gobolkaasi, midnimada shicibka iyo sidii laysugu tashan lahaa.
Ammaanka guud ee magaalada Badhan ayaa siweyn loo adkeeyey waxaana la sheegay in ciidanka lagu amray inay tallaabo ka qaadaan ciddii isku dayday carqaladaynta shirkaasi muhiimka u ah gobolka.